Ny Hiahia dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny Volamaka no eo alohany ary ny Sakamasay no eo aoriany. Misy koa ny Malagasy manonona hoe Tsiahia na Sahiahia. Na dia mampiasa teny mitovy na mitovitovy aza ny isam-paritra dia mety samihafa ny fari-potoana ao aminny taona tondroina aminio teny io arakaraka ny faritra eto Madagasikara. Aminny Antesaka dia volana fahafito ny Hiahia, fa fahadimy aminny Sihanaka sy ny Tanala fotoanny ririnina, fahafito aminny Antanosy Rakotosaona, 1972. Aminny Sakalava dia volana mifanandrify aminny volana Mey ny Hiahia ...
Ny Bezanozano dia foko eto Madagasikara, ao amin ny tany lemaka manodidina an i Mangoro, voafaritry ny tany onenan ny foko Sihanaka ao avaratra, ny Betsimisaraka ao atsinanana, ary ny Merina ao andrefana. Ireto ny tanàn-dehibe ao: Moramanga sy Beparasy ary Anjiro.
Ny Faosa dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny volana Volasira no eo alohany ary ny Volamaka kosa no eo aoriany. Misy koa ny Malagasy manao hoe Volamposa, Fosa, Volapaosa, Ifosa na Volampaosa. Aminny faritry ny Bara sy ny Vezo sy ny Masikoro ary Sakalava dia mampiasa teny hafa, dia ny hoe Beray na Zaray. Na dia mampiasa teny mitovy na mitovitovy aza ny isam-paritra dia mety samihafa ny fari-potoana ao aminny taona tondroina aminio teny io arakaraka ny faritra eto Madagasikara. Aminny Bara dia volana mifandrify aminny volana Marsa ny Faosa ary vola ...
Ny Betsimisaraka dia foko lehibe eto Madagasikara, ao amin ny lemaka manana manaraka ny morontsiraka atsinanana, vafaritry ny reniranon i Bemarivo ao avaratra sy ny onin i Mananjary any atsimo. Ireto ny tanànan ny Betsimisaraka: Maroantsetra, Fenerivo, Soanierana-Ivongo, Toamasina, Vatomandry, Mahanoro ary Andevoranto.
Ny Antesaka na Antaisaka na Tesaka dia vondrom-poko iray ao atsimo-atsinanan i Madagasikara. Ao amin ny distrikan i Vangaindrano, faritra Atsimo-Atsinanana, no betsaka azy ireo. Ny faritra onenany dia eo anelanelan i Mananivo ao avaratra, Itomampy sy Ionaivo ao andrefana, ary Lavibola ao atsimo. Ny teny hoe Antesaka na Antaisaka dia midika ara-bakiteny hoe "ireo avy any amin ny Saka", izany hoe "ny Sakalava". Ireto ny foko lehibe ao: ny Antemanambondro, ny Antevato, ny Masianaky, ny Zarabehava, ny Zarafaniliha ary ny Zaramanampy. Tamin ny taona 2013 dia niisa 600 000 eo ny Antesaka.
Ny Tanala dia foko any amin ny faritra atsimo-atsinanana eto Madagasikara, ao amin ny faritra misy ny havoanan Ikongo, voafaritry ny tanin ny Betsileo ao andrefana, ny Betsimisaraka sy ny Antambahoaka sy ny Antemoro ary ny Antefasy ao atsinanana, ary ony Manampatrana ao atsimo. Ireto ny tanàna lehibe any: Ambohimanga Atsimo sy Ivohibe ary Ifanadiana.